mac Archives - Page2of3- Saturngod
Text Mate2on github
Posted on Updated January 31, 2013 August 11, 2012 by saturngod
မနေ့က textmate2ကို github ပေါ်မှာ တွေ့တာနဲ့ တစ်ခါတည်း build လုပ်ပြီး သုံးကြည့်လိုက်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Text Mate ကို $60 လောက်ပေးရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ Text Mate ရဲ့ ပြိုင်ဖက်တွေ ဖြစ်တဲ့ Sublime Text 2, Chocolate စတာတွေက Text Mate နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်လာပါတယ်။ Sublime Text2ဆိုရင် Free ရပြီးတော့ Linux , Windows, Mac platform တွေ မှာသုံးလို့ရပါတယ်။ အစက Sublime Text2ကို ဝယ်မလို့ စဉ်းစားထားပေမယ့် Text Mate […]
Posted on Updated January 31, 2013 February 16, 2012 by saturngod
Lion ပြီးရင် ဘာ ကြောင်မျိုးနွယ် အသစ်ထွက်မလဲစဉ်းစားနေတာ Apple က နောက်ထပ် OS အသစ်ကို Mountain Lion လို့ နာမည်ပေးပြီးတော့ စတင် မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ Lion မှာ ကျွန်တော်တို့တွေကို touch အသစ်တွေ နဲ့ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ အခု Mountain Lion မှာ အခြား feature အသစ်တွေ ထပ်ပါလာပြီ။ iOS က feature တွေကို Mountain Lion မှာ ထည့်ပေါင်းလာပါတယ်။
Posted on Updated January 31, 2013 August 23, 2011 by saturngod
Zawgyi နဲ့ gtalk ပြောလို့ မရဘူးဆိုတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ Adium ကို အသုံးပြုစေချင်တယ်။ Adium မှာ font ပြောင်းဖို့အတွက် Adium > Preference > Appearance ကိုသွားပါ။ Contact List မှာ List Layout က customize button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပုံတွင် ပြထားပါတယ်။
Lion that made me cry
Posted on Updated June 9, 2011 June 9, 2011 by saturngod
Lion ကို ထူးမြင့်နောင် သွင်းပြီးတော့ facebook မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ။ font ၂ မျိုးပါပါတယ်။ Myanmar MN နဲ့ Myanmar Sangam MN ပါ။ font ကတော့ Unicode 5.0 ဖြစ်နေတော့ လက်ရှိ စာလုံးတွေကို ကောင်းကောင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ မယ့် ဆိုရင် –် နဲ့ –့ က နေရာလွဲပြီး တွေ့နေရမယ်။ font ရေးဆွဲပေးထားတဲ့ company ကတော့ Copyright (c) 2010 by Murasu Systems Sdn. Bhd. Malaysia. All rights reserved. နောက်ပြီးတော့ default keyboard ပါပါတယ်။ သို့ပေမယ့် […]
Apple Core i7 Macbook Pro ?
Posted on Updated February 9, 2010 by saturngod
add path in Mac $PATH
open terminal $cd ~ $open -a TextEdit .profile In TextEdit # MacPorts Installer addition on 2009-10-28_at_16:24:44: adding an appropriate PATH variable for use with MacPorts. export PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH # Finished adapting your PATH environment variable for use with MacPorts. Add new path in export PATH like this # MacPorts Installer addition on 2009-10-28_at_16:24:44: adding an appropriate […]
Posted on Updated January 14, 2010 January 14, 2010 by saturngod
ရုံးထဲမှာဗျာ…. Boss ကလည်း Mac Operation Manager ကလည်း Mac Marketing သမားတွေကလည်း Mac Designer ကလည်း Mac Developer ကလည်း Mac နေရာစုံမှာ Mac Saturngod
Posted on Updated January 6, 2010 January 6, 2010 by saturngod
OpenType Rendering ကို CoCoa နဲ့ ရေးထားတဲ့ application တွေက support လုပ်ပါတယ်။